Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Talaado Ah 7 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Talaado Ah 7 June
June 7, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Weeraryahanka Masar Mohamed Salah, oo 29 jir ah, ayaa u sheegay saaxiibadiisa ugu dhow inuu doonayo inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo Liverpool , laakiin wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan ka dib markii Barcelona ay u ballan qaaday inuu u dhaqaaqayo Nou Camp xagaaga soo socda. Mirror
Real Madrid ayaa laga yaabaa inay isku daydo inay ka afduubato Arsenal saxiixa Gabriel Jesus xagaagan Manchester City . Atletico Madrid ayaa sidoo kale xiiseyneysa weeraryahanka Brazil. Sun
Manchester City ayaa sare u qaaday xiisaha ay u qabto xiddiga garabka uga ciyaara Arsenal iyo England Bukayo Saka, oo 20 jir ah, iyagoo isha ku haya inay xadaan socod ay ku maraan kooxda ay xafiiltamaan ee Liverpool, kuwaas oo sidoo kale u aqoonsaday bartilmaameed mustaqbalka. Mail
Tottenham ayaan wax qorshe ah u haynin in ay la soo wareegto kabtanka Wales ee Gareth Bale markii saddexaad iyada oo 32 jirkan garabka ka ciyaara uu ka fikirayo halka uu isugu diyaarinayo koobka adduunka ee sanadkan. Telegraph
Weeraryahanka Senegal Sadio Mane, oo 30 jir ah, ayaa durba waydiistay saaxiibkiis Liverpool iyo ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Bayern Munich Thiago Alcantara haddii uu u guuri karo gurigiisa Munich haddii uu ku biiro kooxda heysata horyaalka Bundesliga xagaagan. Mail
Barcelona ayaa u furan inay Manchester United kala xaajooto soo wareejinta ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Frenkie de Jong, oo 25 jir ah, kaasoo ku biiraya Old Trafford, laakiin kooxda reer Spain ayaa weli dalab rasmi ah ka helin United. Sport -spanish
Tababaraha Netherlands Louis van Gaal ayaa sheegay in weeraryahanka reer Holland Steven Bergwijn, oo 24 jir ah, uu u baahan yahay inuu ka tago Tottenham oo uu ku biiro Ajax “sida ugu dhakhsaha badan”. Telegraaf
Spurs waxay ku dooneysaa lacag dhan 30m euros (£25.6m) si ay ugu ogolaato Bergwijn inuu ku biiro koox kale xagaagan. Ciyaaryahanka ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah kooxda ay xafiiltamaan Premier League ee Everton , iyadoo kooxda heysata horyaalka Holland ee Ajax ay weli ka shaqeyneyso dalab rasmi ah. Fabrizio Romano
Chelsea ayaa xiiseyneysa daafaca reer Holland ee Juventus Matthijs de Ligt, oo 22 jir ah, laakiin tababaraha Blues Thomas Tuchel ayaa bartilmaameedkiisa ugu weyn ee daafaca weli ah 23 jirka Sevilla iyo daafaca dhexe ee France Jules Kounde. talk SPORT
Angel di Maria, oo 34 jir ah, ayaa u soo baxay dookh jaban oo Barcelona ah iyadoo garabka Argentina uu ka tagayo Paris St-Germain marka uu qandaraaskiisu dhaco xagaaga. Barca ayaa sidoo kale isha ku heysa Raphinha, oo 25 jir ah, laakiin waxaa meesha ka saaray qiimaha Leeds ee 60m euros (£ 51.3m) ee garabka Brazil. Marca
Newcastle ayaan qorsheyneynin inay lasoo saxiixato Manchester United Dean Henderson, oo 25 jir ah xagaagan, inkastoo si joogta ah loola xiriirinayo goolhayaha England. U dhaqaaqista weeraryahanka Everton iyo England Dominic Calvert-Lewin, 25, iyo daafaca Manchester City iyo Netherlands Nathan Ake, 27, ayaa muujinaya wax adag. Telegraph
AC Milan , Inter Milan , iyo Arsenal ayaa dhamaantood doonaya weeraryahanka Sassuolo iyo Italy Gianluca Scamacca, 23, kaasoo dhaliyay 16 gool Seri A xilli ciyaareedkii hore. Football Italia
Manchester United iyo Bayern Munich ayaa isha ku haya heesta daafaca midig ee kooxda Inter Milan Denzel Dumfries, oo 26 jir ah, xagaagan. Mail
Agaasimaha Isboortiga Newcastle Dan Ashworth ayaa lagu soo waramayaa inuu mudnaanta koowaad siiyay inuu keeno garabka midig ee xagaagan, iyadoo kooxda Bayer Leverkusen iyo xulka France Moussa Diaby, 22, iyo weeraryahanka Watford iyo Senegal Ismaila Sarr, 24, ay yihiin laba ciyaaryahan. Sky Sports
Daafaca reer Holland Sven Botman, oo 22 jir ah, kaasoo lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Newcastle , ayaa sheegay in AC Milan ay weli ka shaqeyneyso heshiiska ay ku dhameystireyso saxiixiisa Lille. Football Italia
Daafaca dhexe ee England James Tomkins, 33, ayaa lagu soo waramayaa inuu qandaraas cusub oo hal sano ah u saxiixay Crystal Palace, halka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Scotland James McArthur, 34, uu sidoo kale la fahamsan yahay inuu heshiis cusub ka saxiixay Selhurst Park. Sun